Haulm na-egbu na nduku na 2021: Gini bu ihe ndi a? - Potatoes News
In mkpụrụ nduku, egbu egbu na-amalite na July. A naghị anabata Reglone na Finale maka igbu ọgwụ ọkụ na nduku. Ndi oru ndi oru ugbo nke ndi oru ugbo site na Planet Health Action Plan, Delphy mere nyocha n’ime uzo na uzo ozo na 2019 na 2020.
Mgbe afọ abụọ nke nyocha, o doro anya na omume ahụ ga-enwe ike ịnagide ohere ndị dị ugbu a na ezigbo ọmụma nke eziokwu. Otú ọ dị, ọ na-eji nwayọ nwayọ na naanị ọgwụgwọ zuru oke.
Naanị spraying full ubi
Na mgbakwunye na ị nweta akara ogo ziri ezi na ịkwụsị nje site na aphids, igbu egbu ngwa ngwa dịkwa mkpa iji belata ihe ize ndụ nke nje nke ọrịa nje dịka Erwinia na Phoma.
A na-eji usoro ịgba spray na-agba ọsọ na Quickdown na Chakwasa ihie Plus na nnukwu ịgba na-atụnyere na ikpe na Emmeloord na nkwado ikuku na WingsSprayer nwere obere ịgba ịgba. Ọnọdụ n'oge spraying na-ekpo ọkụ na obere RH. Achọpụtala na n'okpuru ọnọdụ ndị a nnukwu ịgba olu na-arụ ọrụ n'ụzọ doro anya karịa a obere ịgba olu: 385 l / ha bụ zuru ezu, 215 l / ha bụ kwa ala.
Chaatị dị n'okpuru na-egosi mmetụta dị na nkwụghachi azụ. Magazin ahụ mekwara otu ihe ahụ. Obere olu maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị enweghị ike ịkọwapụta, dịka ọ dabere na ọnọdụ. Usoro nke Chakwasa ihie na Quickdown na oge spraying enweghị mmetụta. Ọ bụrụ na sprays na abụọ Quickdown na otu Chakwasa ihie anaghị arụ ọrụ nke ọma, ọ ga-ekwe omume mepụta ihe ịgba ọzọ na mmekọrita Plus.
N'ime ọmụmụ ihe ahụ, ọ nweghị ọgwụ spraying na-arụ na ihe ndị na-arụ ọrụ tupu ịpịa iji kwụsị ihe ọkụkụ. Nke a mere ka anyị were anya nke uche hụ ihe dị iche na etiti ihe. Na eserese nke abụọ dị n'okpuru, enwere ike ịhụ na esemokwu dị iche iche buru ibu na August 6 (ụbọchị asatọ mgbe ọgwụgwọ mbụ) mana ọ dịlarị site na August 17 (ụbọchị iri mgbe ọgwụgwọ ikpeazụ). Chakwasa ihie spraying ozugbo ọkụ ahụ (oroma) na-arụ ọrụ kachasị ọsọ na ọnọdụ dị mma. Ahịrị nke ihe ndị ọzọ fọrọ nke nta ka ọ daba.
Mgbe mbụ spraying iji kwụsị ihe ubi, ọ ka mma sere sere nwa ehi. Na ebe nke abuo bu ikpu oku nke ato na nke ato iji gaa n'ihu na ntanye. Ngwunye spraying-ubi nwere ike ịnwe uru na ala adịghị atụpịa ọ bụla mita atọ na ihe egwu mmiri n'etiti etiti ahụ. Na ya n'onwe ya, ịkụ ọkụ na-arụ ọrụ ngwa ngwa karịa naanị ịgba agba. Site na ijikọta ihe ọkụkụ na ihe ọkụ ọkụ na Haulm-Do, a na-echekwa spraying zuru ezu.
Mmechi na ndụmọdụ
Malite na mbido igbu ọchụ.
Malite na Quickdown ma ọ bụ Chakwasa ihie Plus.
Gbanwee ihe ịgba agba na ọnọdụ. N'ebe dị ala RH na ngwa ngwa evaporation nke ụmụ irighiri mmiri na-agba agba, a chọrọ olu nke ma ọ dịkarịa ala 400 l / ha.
Gbaa mbọ hụ na ezigbo oriri, na oge mmiri ozuzo na igwe ojii, enwere ike ịfesa poteto mkpụrụ na mgbede. N'ihi ogologo oge nke ìhè n'oge okpomọkụ, ọrụ ahụ ga-adị mma.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, a nke anọ ịgba nwere ike rụrụ na mmekọrita Plus.
Mgbe spraying kwụsị ihe ubi:
haulm Anam Udeme
Haulm flaps na njikọta ma ọ bụ soro otu ma ọ bụ abụọ ịgba
E nwetara ezigbo nsonaazụ ya na ngwakọta nke flaapu na Loof-Did. Obere ihe ịgba agba abụghịkwa nsogbu na RH dị ala. N'okpuru ọnọdụ dị mma, enwere ike belata ọgwụ nke Spotlight Plus ma ọ bụ Quickdown site na 25 ruo 50 percent.
-Ga-amalite maka ezigbo mmalite
Amachi nitrogen ntakịrị
Ubi ụbọchị mkpụrụ nduku
Na ụbọchị mkpụrụ nduku mkpụrụ na 8 July na Swifterbant, a ga-akọwakwa nsonaazụ nyocha ahụ ma ndị ndụmọdụ Delphy ga-anọ. Achọrọ ndebanye aha n'ihi corona .
Loofdoding na aardappelen na 2021: Wat zijn de opties?
Isi Iyi: Iheanyichukwu
Tags: ngwaahịa nchedo ihe ọkụkụna-eto etongalaba ndukuNkpuru osisi nduku
Nsogbu Wireworm na-eto eto na nduku afọ a
Ọrịa nduku: egwu kachasị mkpa na otu esi emeso ha
Mkpụrụ osisi gbanye mgbọrọgwụ nwere ike gbanwee Mgbanwe Mkpụrụ Nduku Na India
McCain Foods na-ekwupụta owuwu nke ụlọ ọrụ nhazi nduku nke abụọ na China
Nsogbu Nematode: Atụmatụ 5 na iji Nemathorin